Zvinyorwa: Mukurumbira Kuongorora, Kufungisisa Kweshungu, uye Nyevero dzeKutsvaga neSocial Media Mentions | Martech Zone
Zvinyorwa: Mukurumbira Kuongorora, Kufungisisa Kweshungu, uye Zviziviso zveKutsvaga neSocial Media Mentions
Svondo, Zvita 13, 2020 China, December 24, 2020 Douglas Karr
Nepo mazhinji ekushambadzira tech mapuratifomu eanozivikanwa kuongorora uye manzwiro ongororo anotarisa zvakaringana pasocial media, Mifananidzo ibhuku rakazara rekutarisa chero kana zvese zvataurwa zveako brand online.
Chero chero dhijitari chivakwa chakabatanidzwa kune yako saiti kana chakataurwa chako brand, chigadzirwa, hashtag, kana zita remushandi… rinotariswa nekuteverwa. Uye iyo Brandmentions chikuva inopa yambiro, yekutevera, uye manzwiro ongororo. Mifananidzo inogonesa mabhizinesi ku:
Vaka Dzakabatanidzwa Ukama - Tsvaga uye ubatanidzwe nevatengi vako uye vanokoshesa maficha mu niche yako iyo inokupa iwe hukuru hwekutengesa mhando & nzwisiso huru nezve yako yakanangwa musika.
Wana uye Chengetedza Vatengi - Ziva kuziva zvaunofarira zvevatengi vako uye gadzira zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvavo nezvido zvavo. BrandMentions inokuudza iko kwekusimudzira zvigadzirwa zvako uye kuwana vatengi vatsva.
Manage Brand Mukurumbira - Nekugara uchiziva kuti ndiani anotaura nezvako uye chii, iwe unowana simba rekunzwisisa uye kuchengetedza mukurumbira wako mumusika unotyisa wemakwikwi.
BrandMentions rave chishandiso chakakosha kuyera kubudirira kwemakambani edu ekushambadzira. Isu tinoshanda nesimba kuvaka ruzivo pamusoro pechiratidzo chedu pamhepo, uye hapana chimwe chishandiso chatakaedza chinowana zvakawanda zvinotaurwa seBrandMentions. Isu tinokurudzira zvikuru!
Mark Traphagen, Mutungamiriri Mukuru weBrand Evangelism paMabwe Tembere
Pamwe pamwe nemawebhusaiti, Mifananidzo monitors uye anotora enhau enhau kutaurwa paLinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, uye Youtube.
Webhu uye Zvemagariro Ekutarisa - Tarisa zvese zviri kutaurwa nezvekambani yako kana chigadzirwa pane ese magero ane basa, angave ari webhu kana enhau enhau. Brand Mentions inokuchengeta iwe uchienderana nezvose zvakakosha mumusika wako uye chero chinhu chakabatana nekambani yako, ichipa chaiyo-nguva yambiro yakanangana nebhokisi rako rekunyora.
Anokwikwidza Kusora - Kuongorora nzira dzemakwikwi ako haisi sarudzo chete. Icho chikamu chakakosha cheyako nzira yekukura. Izvo zvakanyanya iwe zvaunogona kuziva nezve rako bhizinesi uye vako vakwikwidzi, zvakanyanya iwe zvaunogona kudzidza, kugadzirisa, uye pakupedzisira kubudirira. Iwe unogona ikozvino kusora vanokwikwidza kubva kwakasiyana makona uye uve neakajeka maonero ekuti kukwikwidza kwacho kwakamira chaizvo.
Yechokwadi-Nguva Notifications - Tsvaga kuti ndiani akataura nezvako uye kupi nguva yavakaita. BrandMentions inokupa chaiyo-nguva Notices pese paunowana nyowani kutaurwa kana zvinongedzo. Iwe ikozvino wave nekukasira kuwana kune ese akakosha data ane chekuita neyako brand kune iyo webhu uye pasocial network.
Akaundi Yangu Yemaoko
Ndanga ndichishandisa Mifananidzo kwemwedzi yakati wandei izvozvi uye zvave zvinonakidza. Iko kugona kuongorora zvese papuratifomu imwe kunonyanya kubatsira. Izvo chaizvo zvakatora maminetsi mashoma kuiseta iyo account uye nekuwedzera mimwe misoro (pamwe neyangu saiti) yekuteerera.
Iyo yakazara yezuva nezuva email inogamuchira ndizvo chaizvo zvandinoda kuongorora uye kupindura kune chero eangu saiti zvitaurwa nemazita kana ne URL:
Kubva kutanga kushandisa Mifananidzo, Ndine:
Ndakaziva rimwe bhuku raibira zvirimo. Ivo kubvira vabvisa izvo zvirimo uye havachisiri kuzvidzorerazve.
Yakaratidza kumwe kushambadzira inopisa vanga vachigovana zvirimo zvandanga ndisiri kuteedzera kana kuratidza kuonga kwangu.
Kuzivikanwa mamwe mawebhusaiti ayo mamwe maspika akabvunzurudzwa kana kuti ari kunyorerwa - achipa mukana kwandiri kuti ndiwane kumwe kuwedzerwa.
Ini handina hanya nekuongororwa kwemanzwiro sezvo kuburitswa kwangu kusiri kunyora sevhisi kana chero chinhu chinokakavara. Nekudaro, kana iwe uri kutengesa chigadzirwa kana sevhisi, kunzwisisa kana mafungiro pamusoro pechiratidzo chako akanaka kana asina kunaka zvakanyanya kukosha kune rako rese bhizinesi kubudirira.
Tanga Yemahara Yekushambadzira Muedzo
Tags: backlink yekutarisabrand yekutarisakududzirwamakwikwi kuongororakukwikwidzana njereFacebookFacebook kuongororamativi mana akaenzanamativi kuongororahashtag kuongororakeyword monitoringLinkedInlinkedin kuongororataura zviyeuchidzoPinterestpinterest kuongororaRedditreddit kuongororamukurumbira manejimendimukurumbira kuongororamanzwiromanzwiro ongororoevanhu vezvenhaumagariro enhaumagariro enhauTwittertwitter kuongororaYouTubeYouTube yekutarisa
10 Matipi Ekugadzira A Real Estate Webhusaiti Iyo Inotya Vanogona Vatengi uye Vatengesi Kuti Vabatanidze